Madaxweyne Siilanyo Oo Cigaal Iyo Rayaale Kaga Duwanaaday Muranka Masuuliyiinta Xukuumada |
Madaxweyne Siilanyo Oo Cigaal Iyo Rayaale Kaga Duwanaaday Muranka Masuuliyiinta Xukuumada
Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo, ayaa aad uga duwan labadii madaxweyne ee ka horeeyay ee Marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo Md. Daahir Rayaale Kaahin, marka la eego adkaynta nidaamka dawladnimo.
Marxuum Cigaal oo talada Somaliland qabtay iyadoo ay xaaladu dalku ahayd mid liidata amni ahaan dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba, ayaa haddana ku guulaystay inuu dhiso haykal dawladnimo oo tisqaaday. Waxyaabaha uu marxuum Cigaal hirgeliyay si ay dawladnimadu u xoogaysato waxa ka mid ahaa isku duubnaanta golaha wasiirada, si aanay shaqada qaranku u noqon mid habac ah.
Wakhtigii Marxuum Cigaal lama arag laba wasiir oo warbaahinta isu mariya eedaymo, waxaana inta badan wixii soo kordha uu Marxuum Cigaal ku xalin jiray gudaha nidaamka dawladnimo, halkii ay banaanka uga soo bixi lahaayeen.
Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin ayaa isaguna dhisay xukuumad ka badbaaday in ay ku wada jiraan wasiirro iyo masuuliyiin iska soo horjeeda. Mudadii uu Daahir Rayaale xilka dawladnimo hayay wakhti ka mid ah ayaa la arkay laba masuul oo xukuumadiisa ka tirsan oo warbaahinta isu mariyay hadalo eedaymo ah, waxaanu Madaxweyne Rayaale kaga jawaabay inuu labadii masuulba xilka ka qaaday, isagoo xil ka qaadistooda ku sababeeyay in khilaafkooda iyo murankooda oo ahaa dan shakhsi ahi uu dhaawacayo amaba lumin karo nidaamka dawladnimo ee dalka.
Hase yeeshee toddobadan sannadood ee uu Madaxweyne Siilaanyo xilka hayay waxa ina badan la arkaa masuuliyiin ka wada tirsan xukuumadda oo si toos ah iyo si aan toos ahaynba hawada isu marinaya eedaymo kala duwan, kuwaas oo u badan dano shakhsi ah oo ay isku seegeen.
Toddobaadkan oo u dambeeyay waxa la arkay iyadoo qaar ka mid ah wasiirada madaxweyne Siilaanyo isu jeedinaya eedaymo islamarkaana waxa ay isku haystaan oo uu khilaafkoodu salka ku hayaa dano ka baxsan qaranka oo ah dano shakhsi ah.
Haddaba, Madaxweyne Siilaanyo oo maraya wakhtigii ugu dambeeyay ee maamulkiisa dawladnimo, muddo xileedkana ay uga hadheen wax ka yar saddex bilood, waxa looga fadhiyaa inuu ilaaliyo nidaamka dawladnimo ee seeska adag leh islamarkaana uu talaabo adag ka qaado wasiirada iyo masuuliyiiinta kale ee ku dul laacdamaya shacabka. Haddii khilaafka xukuumada dhexdeedu warbaahinta gaadho waxa meesha ka baxaysa danihii qaranka ee loo xilsaaray.
Xigasho-Wargeyska Geeska Africa.